Immisa ayey ku kacaysaa hagaajinta shaashadda iPhone ama iPad ee Apple? | Wararka IPhone
Toddobaadkii la soo dhaafey waxaan inbadan ka hadalnay qaladka 53, oo sababay markii dayactirka shaashadda iyo / ama badhanka bilowga ee iPhone 6 ama 6 Plus ee adeegga aan la oggolaan taasina waxay sababtay in aaladda gebi ahaanba la xannibo oo aan la isticmaali karin, iyadoo aan la heli karin xal hadda. Adeegsiga adeegyadan aan rasmiga ahayn ayaa aad u kordhay muddooyinkan dambe sababtuna tahay marin-u-helkeeda weyn ee kuwa naga mid ah oo aan ku haysan Apple Store meel u dhow, maaddaama qiimaha la filayo inuu aad uga hooseeyo kan Apple. Laakiin ma runbaa in qiimayaashu aad u hooseeyaan marka loo eego kuwa rasmiga ah? Miyaad magdhaw ka bixinaysaa halista aaladda lagu faragalinayo adoo gebi ahaanba waayi doona damaanada oo aad isticmaaleyso waxyaabo tayo shaki leh? Aynu aragno waxa ay Apple ka qaaddo dayactirka kala duwan ee qalabkeeda.
1 Dayactirka IPhone ee Apple
2 Dayactirka IPad ee Apple
3 Ma mudan tahay in la qaato khatarta?
Dayactirka IPhone ee Apple
Sawirkani wuxuu kakooban yahay qiimaha rasmiga ah ee Apple.es laga bilaabo Febraayo 14, 2016. Badalida shaashadda iPhone 5, 5c iyo 5s waxay leedahay qiimo dhan € 147,10, taas oo ah sidoo kale wuxuu ka sarreeyaa € 70 ee ay ku weydiisteen adeeg aan rasmi ahayn shaashadda iPhone 5-kayga. Waa labalaab laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa inaanan ku qanacsanayn shaashadda ay dusha i saareen, taas oo lagu arki karo laydhadhka iftiinka dambe ee dusha sare, ama natiijada ugu dambeysa, iyadoo shaashadda la qalday oo aan suurtagal ahayn xal . Cabashooyinkaygii ku saabsanaa adeegga farsamo ee aan rasmiga ahayn ee aan u qaatay waxay ahaayeen kuwa aan waxtar lahayn oo waxaa iiga haray iPhone 5 dayactir liita. Bogagga internetka qaarkood waxaan ku arkay qiimayaal gaaraya € 120 oo dayactirka ah.
Qalab casri ah qiimayaashu si layaab leh ayey u hooseeyaan, marka iPhone 6 wuxuu ku kacayaa € 127,10, iyo 6 Plus wuxuu u dhigmaa € 147.10 oo ah kii hore ee iPhone 5. Qiimaha ay igu siiyeen isla adeegga farsamada ee shaashadda iPhone 6 ahaa € 120 (shaashad aan asal ahayn, kaliya "la jaanqaadaysa" sida farsamayaqaanku ii sheegay). Daalacashada degellada kaladuwan ee dayactira iPhones Waxaan hubiyey wax kayar ama kayar isla qiimahaas. Websaydhyada qaarkood ee ballanqaadaya inay isticmaalaan oo keliya qaybaha asalka ah, qiimaha ayaa kor ugu kacaya ilaa € 180. Ma helin qiimaha dayactirka ee shaashadaha cusub ee iPhone 6s iyo 6s Plus. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qiimaha Apple ay ku jiraan € 12 kharashka dhoofinta iyo VAT.
Isbedelka batteriga ee Apple waa € 79 iyadoon loo eegin aaladda, taas oo € 12 ay tahay in lagu daro haddii rarka loo baahan yahay. Beddelida batariga ku jira taleefankayga iPhone 5 waxay igu kalliftay € 40 oo ah adeeg aan la oggolaan, saddex bilood ka dib si dhib yar ayaan u heli karay inay timaado duhurkii iyadoo la isticmaalayo. Websaydhada aan la tashaday, qiimaha badanaa waa ilaa € 60.
Dayactirka IPad ee Apple
Dayactirka IPad-ka waxaa lagu soo daray hal suurtagal oo ka mid ah adeegga farsamada ee Apple.es. Qiimuhu waa isbedbedalayaa iyadoo ku xiran aaladda, laga bilaabo € 201,10 ee iPad Mini iyo Mini 2 illaa € 671,10 ee iPad Pro. Waxay ka mid yihiin shipping 12 kharashka dhoofinta iyo VAT. Waxaa macquul ah inaad toos ula xiriirto Apple una sharaxdo kiiska waxaad heli doontaa qiimayaal kale iyadoo kuxiran waxyeelada. Si kastaba ha noqotee, qiimaha kiiskan waa mid aad u sarreeya, gaar ahaan haddii aan tixgelinno in moodello badan oo iPad ah oo beddelaya muraayadda ay ku filan tahay in wax walba ay caadi ku noqdaan, iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo guddiga LCD.
Beddelka batariga wuxuu leeyahay hal qiime oo ah € 99 taas oo € 12 ay tahay in lagu daro haddii rariddu ay lagama maarmaan tahay. Ma sahlana in la helo adeegyo farsamo oo aan rasmi ahayn oo beddelaya batariga kiniinka Apple, ugu yaraan ma aanan helin, sidaas darteed isbarbardhigi maayo qiimahooda.
Ma mudan tahay in la qaato khatarta?
Marka laga hadlayo iPhone, jawaabtu way cadahay: Maya. Dammaanadda ah in dayactirku kugu siinayo adeegga farsamada Apple, qiimaha iyo asalka shaki la'aanta qalabka ayaa ka badan sabab ku filan in Apple looga doorto adeegyada kale ee aan la oggolaan. Marka laga hadlayo Ipad-ka waxku ma cada sida sababta oo ah Apple ma kala soocdo inta u dhexeysa waxyeellooyinka yar yar iyo kuwa waaweyn, iyadoo loo isticmaalayo hal khidmad ah wixii dayactir ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Immisa ayey ku kacaysaa hagaajinta shaashadda iPhone ama iPad ee Apple?
Qiimaha shaashadda isbeddelka .. Waxay yihiin € 115 iPhone 6 iyo € 140 iPhone 6 Plus, waxaan ahaa usbuuc ka hor qiimuhuna isma beddelin ama tukaan kasta oo tufaax ah ayay ku leeyihiin qiime
Antonio Jesus Olmo Ramos dijo
Iyadoo la adeegsanayo iPad Pro, haddii aad leedahay qaabka aasaasiga ah, waxaa lagugula talinayaa inaad la wadaagto mid kale ka hor intaadan shaashadda beddelin.
Jawaab Antonio Jesús Olmo Ramos
Muxuu qof walba been u sheegayaa? Apple ma hagaajiso galaaska iPad-ka, midna. Beenta Apple, baaro. WUXUU sameeyaa waa inuu ku siiyaa mid kale qiimo waali ah oo loogu talagalay muraayadda beddelka. Waa in la xusuusnaado in qiimaha lagu beddelayo qaybaha ama uu ka badnaan karo kuwa soo-saarka. Apple ma awoodo inuu bedelo hal galaas oo uu dayactiro cilladaha aluminium ka soo dhaca. Markaa waa inaad kiiska ugu badashaa bilicsanaanta qiimahoodu aad uga badan yahay. Iyagu waa dhibaatooyinka naqshadeynta xun markay isticmaalayaan xabagta wax walba ama ku dhowaad wax walba.
Waxay umuuqataa been intee le’eg beenaale.
Ku jawaab Cocoplano